Ogaden News Agency (ONA) – Ethiopia oo Burisay shuruudihi Wadahadlka ee u yaalay ONLF iyo Ethiopia
Ethiopia oo Burisay shuruudihi Wadahadlka ee u yaalay ONLF iyo Ethiopia
Waxaa maanta kusoo afjarmay wadahadlkii Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO/ONLF) iyo gumeysiga Ethiopia uga socday wadanka Kenya. Wadahadlkaas oo la isku afgaran waayay halkaas oo Jabhada ONLF ay muujisay awooda iyo mudnaanta shacabka Ogadeniya ay leeyihiin.
Gumeysiga Ethiopia ayaa kabaxay shuruurdihi wadahalka iyaga oo jabibiyay qodobki lagu heshiiyay ee ahaa in aan wax shuruud ah lagu xidhin wada xaajoodka. Gumeysiga Ethiopia ayaa shuruud ka dhigtay in Jabhada ONLF qaadato dastuurka Ethiopia midaas oo ah shuruud ka hor imaanaysa go’amadi wadafadhigii hore ee loogu gogol xaadhayay wadaxaajoodka ONLF iyo Ethiopia.
Jabhada ONLF waxay caalamka tustay in shacabka Ogadeniya waxna diidi karaan waxna oggolaan karaan xuquuqda aayo katashiga shacabka Ogadeniyana uu yahay midka kaliya ee xal waara loogu heli karo daggaalka u dhaxeeya ONLF iyo Ethiopia. ONLF Sidoo kale waxay muujisay dareenka iyo rabitaanka shacabka Ogadeniya iyaga oo ka diiday gumeysiga madow ee Abbysinia inuusan ku khaldin mansab iyo waxaan u qalmin kana hor imanaya ujeeddadii iyo hadafkii soo taxnaa muddada dheer.
Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya waxay soo saartay warsaxaafadeed ay ku sheegtay in wafdigi wadaxaajoodka ee ay Ethiopia soo dirsatay uusan xurmayn qodobbadii uu horay u saxeexay. Taasoo muujinaysa sida aysan dowladda Ethiopia diyaarka ugu ahayn in qaddiyadda Ogadenia lagu xalliyo wadahadal iyo miis korkiis.
Ururka ONLF oo horey u sheegay in Ethiopia qoriga caaradiis ay ka doorbiday wada xaajoodka ayaa warsaxaafadeedka ku sheegtay in Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeniya ay diyaar u tahay wadahadal xalwaara loogu helo dhulka Ogaden haddii laga helo gumeysiga Ethiopia.
asc waxaan in yar usheegayaa ilma aderkay oo ah waano dagaal waxba lagu gaaro ee fdln shacabka gado gobalka waad aragtaan sidda ay yahiin ee shacabka u naxa fdln shacabka waa kuwa aad u qaadateen qoriga ogaada taas haddii aad tahiin rag dano gaar ah wado wax hormar ah gaari maysaan balse haddii aad shacabka dartii u qadeen qoriga ogaada u naxa shacabka waa iga waano ilmo adeer nimo cobrawali22/DHASHEEG/WAAMO WED/17/10/2012 TIME 22:58 00 GUUL INSHAA ALAAH AYAAN IDIN RAJAYNAYAA UNAXA SHACABKA AAD DARTOOD U QADEEN QORI UNAXO FDLN
Asc. Ogadenia way xoroobi doontaa , Runtii aad ayaan u xiisaynayay oo aan ugu faraxsanaa wada hadalkaas, sidoo kalana cabsi aad u wayn ayaa iga haysay in ay wayaanuhu hogaaminteena khiyaamaan oo ay heshiis been ah intay saxeexaan marka gudaha la isugu tago ay badalaan waayo waa khaa’imiin aad ay u fogtahay necbaanshaha ay inoo qabaani.
In marwalba ay jabhadu wada hadal diyaar u tahay waa raganimo, oo caalamkoo dhan ayaa arka waana wax lagu dhiirado.
waxaan aad ugu hanbalyaynayaa maamulka jabhada oo muujiyay raganimo aad u saraysa kana dhiidhiyay rabitaanka shacabka ogadenia, waxaana aad ugu faraxsanahay inay arkaan ajo gudhay wixii lamidaba in, aanaan marna is dhiibayn sidoodii oo kale balse heshiis dhab ah aan marwalba diyaar u nahay.
Aleylahay gumaysi diidnay oo gunimmo doonimayno, halgan-kuna wuu socon ilaa aay ka xorowdo Ogadenia.
Madaxda geesiyada ah ee JWXO waxa aad u hiilisiin oo aad oofiseen waa jibaad-kii iyo xil-qaan kii dalka iyo dada Ogadenia, waana guul taariikhiya oo baal-dahabiya kutaal.
Ogadenia waa dal iyo dad la qabsaday oo ku jira gacan cadow Itoobiyaana oo aanaan waxba wadaagin.
Dastuur-ka Itoobiya noo saxiixa oo noo sharciyeeya dhulka Ogadenia dadkiisa, maalkiisa, khayraadkiisa in aad ka diidaan waa mid xaqa oo waajiba, waxa ayna Itoobiya uga dhigan tahay waran-xaqa oo wadnaha ka haleelay, shacabka Ogadenyana waxa aay utahay hiil iyo guul-siyaasadeed.
Assalamu caleykum walaalayaal, Mahad oo dhan ALLAH ayaa iska leh SWT marka xiga ONLF waxay taagantahay aaya ka talinta shacabka Ogadeniya oo ay u hurayaan naftooda iyo maalkooda. haddii ONLF maanta ogolaato dhadhamada itoobiya ay leedahay qaata waxay taariikhda kagali doonaan baal madow.
midda kale ninka la baxay dhasheeg waamo waxan leeyahay adeer xornimo baryo laguma helo ee shacabka aad leedahay u tura mawaxan u daynaa in wayaanuhu xukumaan. midda kale xabadda ONLF looma sitto shacabka in lagu laayo ee waxa loo sitaa in lagu xoreeyo oo cadowga lagu laayo.